Sida shabaabka wax u baraan Ciyaalka reer Gedo-Muuqaalo - iftineducation.com
iftineducation.com – Deegaanada Shabaab si ka duwan Magaalooyinka ay maamulaan ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa wax looga bartaa.
Deegaanka Baardheere oo ah mid kamid ah Magaalooyinka ay ku xoogan yihiin Shabaab, si toos ahna uu uga dhaqangalo awaamiirtooda, ayaa Madarasooyinka waxbarashada waxa ay yihiin kuwa ka duwan Magaalooyinka Dowladda ay maamusho.
Sida ka muuqata Sawirada Ardayda ayaa wata Khamiis iyo cimaamado, waxa ayna ku guda jiraan qaadashada Duruusta kala duwan ee madarasada lagu bixinaayo.
Madarasada Cumar Ibnu Khadaab, waxa ay kamid ah tahay meelaha lagu baro caruurta waxbarashada, caruurtaan ayaa ulabisan sida xubnaha Shabaabka ka tirsan ee Khamiiska gaaban iyo cimaamada ay qaataan.
Magaalooyinka dowladda ay maamusho Ardayda waxa ay iskuulada ku aadan UNIFORM isku eeg, taasi oo muujinaysa in qofka uu arday yahay.
Si kastaba ha ahaatee, Caruurta ku nool Magaalooyinka Shabaab ay maamulaan ayaa si fudud ku raaca dagaalamayaasha Shabaabka oo waxa ay ku biiraan dagaalka ciidamada dowladda looga soo horjeedo, maadaama caruurta lagu beero dowlad naceyb iyo waxyaabo kale.
Cabdi good oo fartuun Birimo ku tilmaamay wax aan Afka laga sheegi karin Daawo muuqaalka